Muxuu Yahay Cudurka Chlamydia?
Author Topic: Muxuu Yahay Cudurka Chlamydia? (Read 20037 times)
« on: April 24, 2008, 04:15:08 PM »
Waa xanuunka ugu dawada sahlan ee kamida STD-ga (Cudurada lagu kala qaado galmada). Waxa dhalin kartaa natiijo xun hadii muddadu dheeraato, hadii aan hore loo daween.
Chlamydiyadu waxay waxyeeshaa madaxa ilma-dhaleenka. Iyo indhaha lab iyo dhadigba. Astaamaha xanuunku xili kasta way soo bixi karaan. Inta badan waa 1 ilaa 3 wiig marka uu qofka ku dhaco. Hasa yeeshee waxa laga yaabaa inaaney muuqan ilaa muddo dheer laga soo wareego.
Caadada oo yara badata taas oo sababtay tuubka oo yara weenada.
Kaadida oo badata/ama xanuun aad dareento marka aad kaajayso.
Qaybta hoose ee caloosha oo ku xanuunta.
Xanuun aad dareento galamada.
Caaadada oo si aan nidaamsanayn u timaada.
Xanuun iyo barar kaaga dhaca indhaha (hadii infekshanku gaaro).
Garashada cudurka (baarista):
Baarista ama muunada la qaadayo ma leh wax xanuuna, laakiin waxa lag ayaabaa inaad diiqad yar dareento.
Baarista iyo muunada la qaaday waxa lagu eegaa diirada microscope hadii uu jiro infekshanka chlamydia. Xarumaha qaarkood jawaabta markiiba waa lagu siinayaa. Muunad kale waxa loo diraa sheybaarka waxa ay inta badan qaadataa ilaa laba wiig. Daweentu waa muhiim, waana sahlantahay. Waxa lagu siinayaa antibiotics ah kiniin, sharoobo ama irbada.
Hadii aad xasaasiyad leedhay diid kiniinka antibiotics-ka, ama aad uur leedahay waa inaad dhakhtarkaaga u sheegtaa. Waxa muhiim ah inaad muddada dawada laguu qoray dhamayso (qaadashadeeda).
Hadii laguu sheegay inaad cudurkan qabtid, waxa laguu gudbin karaa lataliye caafimaad si uu kiiso wixii talo ah. Lataliyehu waxa uu ku waydiinayaa inaad leedahay lamaane (nin ama xaas) si iyagana loo baadho inay xanuunka qabaan.
Marka aad dhamaysato dawadaada waa inaad xarunta caafimaadka ku noqotaa wixii baaris ah.
Xanuunada jabtida qaar waxay adkaysi u leyihiin antibiotics-ka, khusuusan hadii aad debeda kasoo qaaday. Baaris dheeraad ah baa loo baahanayaa si loo hubiyo in xanuun baaba'ay. Hadii aaney baabi'in antibiotics kale ayaa loo baahanayaa.
Hadii aan la daweyn chlamydiyada waxay isu bedeli kartaa xanuunka pelvic inflammatory disease (PID). Waxa xanuunka gaaraa dhabarka caloosha inta ka hooseesa xundhurta. PID waxay ka dhigi kartaa dumarka madhalays, ama ilmaha oo ka qoolma.
Hadii aad chlamydiyada leedhay oo aad ilme dhasho waxa aad waad qaadsiin kartaa. Waxaanu ilmuhu dhalan karaa isagoo indhaha ka xanuusanaya. Tan waa in la daweeyaa, hadii kale waxay sababi kartaa indha la'aan. Laakiin waxa fiican inta aanu dhalan in lagu daweeyo
Akhriso Cudurka Jabtida: http://somalidoc.com/smf/index.php/topic,1030.0.html
Views: 27796 December 10, 2007, 08:31:26 PM
Views: 73581 April 21, 2015, 11:16:29 AM
Views: 14124 February 05, 2011, 04:08:18 PM